Zim pro-black law is investment scare
The two-year-old "indigenisation" law which compels all foreign-owned companies to surrender 51% of their share holding to black Zimbabweans is one of the areas of contention between Tsvangirai and his coalition government partner, President Robert Mugabe.
The three-year-old power-sharing deal with Mugabe helped prevent the southern African country from tipping into a full scale conflict and stabilised the economy after bloody elections in 2008.
"Our plan is to transform Zimbabwe into a newly industrialised nation within a generation," said Tsvangirai in what is seen a precursor an electoral platform, ahead of a vote to end the uneasy coalition government.
Tsvangirai who is to face Mugabe in another election set for 2013 said the country needs to respect investors' property rights if it is to revive industries that have shuttered.
On Wednesday Indigenisation and Economic Empowerment Minister, Saviour Kasukuwere, a member of Mugabe's ZANU-PF party, warned foreign companies that fail to comply with the controversial law will face prosecution.
jakalas.kruger - 2012-11-29 18:45
It seems like being indigenous implies being really stupid....in this scenario.
Tyrone Grobbelaar - 2012-11-29 18:56
Take note South Africa.